Turkiga oo duqeeyay fariisimo IS ku leedahay Waqooyiga Suuriya – STAR FM SOMALIA
Turkiga oo duqeeyay fariisimo IS ku leedahay Waqooyiga Suuriya
Milateriga Suuriya ayaa duqeeyay fariisimo kooxda IS ku leedahay xuduuda Turkiga uu la wadaago Suuriya, iyadoo ciidamo uu taageerayo Turkiga oo ka mid ah fallaagada Suuriya ay isu diyaarinayaan sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen goobaha IS ku xooggan yihiin.
Madaafiicda loo yaqaano Artillery ayaa gudaha Turkiga ka duqeeyay magaalooyinka Jarablus iyo Manbij oo ku yaala xuduuda Turkiga uu la wadaago Suuriya.
Illaa 1,500 xoogaga Suuriya ee uu taageerayo Turkiga ayaa ku sugan magaalada Gaziantep, kuwaasoo sugaya kaliya weerar ay ku qaadaan goobaha ay ku xooggan yihiin IS.
Turkiga ayaa ku hanjabay inuu ka sifeyn doono IS magaalooyinka ku dhow xuduuda, waxaana sidoo kale ciidamo Kurdiyiin ah oo uu taageerayo Xulafada Mareykanka ay iyana qeyb ka noqon doonaan duulaanka.
Duqeyntan uu Turkiga ku qaaday goobaha IS ku xooggan tahay ee waqooyiga Suuriya ayaa ka dambeysay, kadib markii qof xirnaa jaakadaha qarxa uu isku qarxiyay goob ay ka socotay xaflad aroos ah, kaasoo dilay in ka badna 50 ruux
Madaxweyne kuxigeenka Mareykanka Joe Biden oo gaaray Turkiga
30 ruux oo lagu dilay qarax ka dhacay goob ay ka sooctay xaflad aroos dalka Turkiga